DHIRTA APPLE "KANDIL ORLOVSKY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO BEERISTA AGROTECHNOLOGY - GEED GEEDEEDKA
Sirqarinta beerashada guulaha ee geedaha tufaaxa "Kandil Orlovsky"
Dadka jecel Apple ayaa aad ugu mahadceliya kala duwanaanta Kandil Orlovsky. Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ay ku koraan meelo kala duwan.
In maqaalka waxaan kuu sheegi doonaa waxa miro mid u eg, sida loo doorto seedling iyo daryeelka geed.
Kala duwan waxaa loogu yeeri karaa da 'yaryar, maadaama ay ahayd mid dhowaan la soo dhaafay. Waxay ahayd natiijada shaqo-ballaadhan ee saynisyahannada Machadka Cilmi-baarista ee cilmi-baarista ee Dhammaan Cilmi-baarista cilmi-baarista ee Dhirta Miraha. Hadafku wuxuu ahaa inuu abuuro noocyo kala duwan oo laga heli karo meelo kala duwan. Natiijada ka soo wareegista miraha Welsey iyo Jonathan noocyo, noocyo cusub ayaa soo baxay - "Kandil Orlovsky". Shaqada waxaa hogaaminayay aqoonyahanka E. N. Sedov. Imtixaannada fasalka ee gobolka ayaa bilaabmay 1997, iyo 2002 dii waxaa lagu galay diiwaanka gobolka.
"Kandil Orlovsky" waa noocyo badan oo caan ah, iyo geedka tufaaxa, sharaxaad, sawiro iyo dib u eegis ku saabsan waxaad ka heli doontaa maqaalkan, waxaa laga helaa ku dhowaad aqal kasta oo xagaaga ah.
Geedku wuxuu leeyahay dherer celcelis, mararka qaarkood way koraan ilaa 5 m. Noocyada caajisku waxay kori karaan ugu badnaan ilaa 3 m Dareemku wuxuu leeyahay cufnaanta celcelis ahaan, foomka wuxuu xasuusiyaa cirifka. Laantu waxay ka baxaan jirridda ku dhow xaglaha saxda ah.
Waa muhiim! Laantu waa mid culus, si ay u jebiyaan. Si looga hortago tan, waa lagama maarmaan in la isticmaalo qoryaha la goosto ka dib goosashada.
Jilifka geedka wuxuu leeyahay midab madow, oo siman. Dhirta dhirta ayaa caan ku ah nooca silsiladda-giraanta ee fruiting. Kolchatka wuxuu noqon karaa mid adag ama fudud.
Miraha Apple] waxay leeyihiin miisaan celcelis ahaan qiyaastii 120 g, laakiin mararka qaarkood waxaa jira kooxo gaaraya 170 g ah Tufaaxu waxay leeyihiin qaab muuqaal ah oo qumman, wax yar oo jilicsan iyo wax yar oo ribbed ah. Duufku waa siman yahay, oo si fiican u iftiimaya. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la dareemo sawir yar oo ah midab cad, laakiin waqti ka dib waxay noqotaa saliid.
Midabka ugu muhiimsan ee miro waa cagaar-jaalle ah, daboolkuna waa casaan. Cadaadiska hareereysan wuxuu ku daboolan yahay kala badh ka mid ah tufaaxa, inta badana waxaa lagu muujiyaa dhinaca loo rogay xagga qoraxda.
Hilibka midhaha ayaa ah jilicsan, wax yar oo la miiray, oo qallafsan, wuxuu leeyahay midab cad, laakiin wuxuu udhow yahay diirka midabka midabka cagaaran. Miraha waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo dhanaan iyo caraf udgoon. Tasters ayaa ku qiimeeyay dhadhanka tufaaxa 4.5 dhibcood, muuqaalkuna wuxuu soo ururiyay 4.7 dhibcood.
Kandil Orlovsky wuxuu leeyahay kala duwan is-baddelid qayb ahaan. Dhirta Apple "Kandil Orlovsky" waxay siin doontaa goosashada qani ku ah, haddii xaafadda ay jiraan ragga sida "Antonovka caadiga ah", "Afrolita", "Venyaminovsky", "Orlik" ama "Freshness".
Muddadii xilliga beertu waxay dhacdaa badhtamaha Sebtembar. Haddii xagaaga aaney kululahay, mudadaasi waxay socon kartaa dhammaadka bisha.
"Kandiil" waxaa loola jeedaa noocyo kala duwan. Dhirta ah ee geed shan sano ah waxay noqon kartaa in ka badan 100 kg, noocyo cufan dhalidda ilaa 130 kg. Geedka tufaaxa wuxuu midho dhoobo sanad walba, mana hayo waqti cayiman.
Ma taqaanaa? Dalagga ugu weyn ee laga soo gooyay geedka 15 jirka ah wuxuu ahaa 163 kg.
Midhaha waxay bilaabaan inay u bislaadaan sanadguurada 4-5aad, iyo noocyada dhirbaaxadu waxay soo saartaa miraha horeba xilli ciyaareedkii 3aad. 10 sano ka dib, wax-soo-saarku wuxuu bilaabmaa inuu yareeyo wax yar.
Gaadiidka iyo kaydinta
Tufaaxu waxay leeyihiin gaadiid fiican. Waxaad dhigi kartaa miro 4-5 bilood, haddii aad abuurto xaalado wanaagsan oo iyaga loogu talagalay, waxay socon karaan illaa dhammaadka jiilaalka.
"Kandil" waxaa loola jeedaa noocyo udgoon udgoon. Geedku waa inuu awood u yeesho inuu heerkulka hoos u dhigo -35 ° C. Tani waxay suurtogal u tahay in ay koraan geed tufaax ah aagga dhexe.
Faa'iidada ugu weyn ee Candil waa joogitaanka diidmada difaaca qolof. Kala duwanaansho iyada ayaa u mahadnaqay hiddesaha Vf. Tani waxay u oggolaanaysaa inuu bannaanka u shaqeeyo inuu beerta ku hayo ugu yaraan. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta uu geedku bilaabmayo inuu ubaxsado, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo sunta cayayaanka ka soo horjeeda cayayaanka.
Midhaha cumilada ayaa ku badan tayada vitamin C, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa isticmaalka cusub. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida miraha la qalajiyey iyo wax soo saarka: samaynta casiirka, karinta compote, jelly, khamriga, cider, samaynta macaanka. Qodobka sare ee pectin wuxuu u ogolaanayaa samaynta tufaaxa, saxaraha, jelliyada iyo muuska ka soo baxa tufaaxa.
Waa muhiim! Ka hor iyo ka dib labeen isu-simidda, waraabinta geedku waa qasab. Bacriminta dabiiciga ah waxay u baahan yihiin in loo isticmaalo quudinta xididka, iyo macdanta - habka buufinta.
Astaamaha geedka tufaaxa "Kandil Orlovsky" waxa ay suurtogal u tahay in la fahmo nooca noocyada kala duwan. Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ka mid ah kuwa ugu ballaadhan.
Xeerarka lagu iibsado geedo caafimaad leh
Maanta, waxaa jira siyaabo badan oo lagu iibsado geedo: suuqa, dhulka taranta, xarunta beerta, internetka.
Si kastaba ha ahaatee, meel kasta oo aad ka iibsan kartaa qalabka tayo sare leh. Adigoo amar ku bixinaya internetka, waxaad halis ugu jirtaa inaad dhoofinayso, oo gabi ahaanba aan la mid ahayn kan sawir ahaan lagu sawiray. Suuqa sidoo kale wuxuu "dhigi karaa" alaabta beeraha xun, oo aadan awoodin inaad hubiso xaalada xididada, taas oo aad muhiim u ah marka aad iibsaneyso.
Waxaa ugu wanaagsan in la booqdo xarunta xanaanada ama xarunta beerta. Faa'iidada helitaanka geedka meelahan oo kale ah waa in seedling lagu qodo adiga, kaa saari doona caleenta aan loo baahnayn iyo geeddi-socodka nidaamka xididka leh isku dar ah. Intaa waxaa dheer, waxaad heli kartaa talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan beeritaanka iyo daryeelidda geedo. Aad bay muhiim u tahay in si taxadar leh loo baaro xididdada geedka. Caadi ahaan, waa inaad aragtaa xididada adag, mid adag oo xidhan. Ma jiri doonto wax dhaawac ah. Waxaad baadhi kartaa haddii ay sidan qalalan yihiin: samee xoqan yar ee lafdhabarta, haddii qoryaha cad ay u muuqdaan - xididdada ayaa xaalad fiican ku sugan.
On nidaamka xididka waa in aanay noqon lahayn kallana iyo daruuro cufan. Heerka ugu fiicnaanta ee seedling waa 1.5 m, jirridda xitaa, waxaa jira ilaa 5 laamood, jilifku waa mid cidhiidhi ah. Waa inaadan dooranin sapling sida waafaqsan mabda'a "inta badan, ka sii wanaagsan", maaddaama ay wax badan ka qaataan wax badan. Hadda waxaad taqaanaa sida loo doorto geedo tufaax ah.
Ka hor inta aan la bilaabin beerashada, waxaa lagama maarmaan ah in la barto sifooyinka habraaca. Waxaan ku talineynaa in aan la socono iyaga.
Mudada ugu wanaagsan ee geedo beerto waa dayrta. Ma aha lagama maarmaan in dib loo dhigo dhacdadan illaa guga, maaddaama dhibicyada heerkulku ay si xun u saameeyaan geedka tufaaxa ayna abuuraan dhibaatooyin leh horumarin dheeraad ah iyo dhalid.
Meesha loo beeray geed waa in la doortaa si taxadar leh. Waxaan ku talineynaa raacitaanka talooyinkan:
Dooro meel leh iftiin fiican. Tani waxay yareyn doontaa sonkorta sonkorta ee miraha waxayna ka hortageysaa hoos u dhaca dhalidda.
Ma taqaanaa? Ha iloobin miraha yar yar - waxay ku jiraan fiitamiin iyo nafaqooyin badan oo ka badan tufaax waaweyn.
Nadiifinta biyaha ayaa saameyn xun ku leh horumarinta geedo. Haddii aysan suurtagal ahayn in geed lagu beero aag caadi ah, waxaadna ka shakisan tahay in biyo-galintu ay macquul tahay, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso qashin khaas ah. Doorasho kale ayaa ah in lagu beero geed ku yaal buurta. Haddii aadan tixgelineynin talooyinkan, waxaad halis ugu jirtaa inaad la kulanto horumarka daciifka ah ee geedka iyo dhimashadiisa.
Xulo meel udhow geedka agagaarka leh manka (sida caadiga ah, sidoo kale, geedka tufaaxa). Tani waxay gacan ka geysan doontaa kordhinta wax-soosaarka.
Wixii beerto "Candil Orlovsky" waxay u baahan tahay ciidda qoyaan-nuugista iyo neefta. Well well loamy, ciid ciid iyo carrada madow. Haddii bacriminta sannadlaha ah la hubiyo, geed ayaa lagu beeray ciidda ciidda.
Nooca kiimikada ayaa sidoo kale muhiim ah: heerkeedu waa inuu noqdo pH 5.6-6.0.
Habka loo beero tufaaxa wuxuu u baahan yahay in lagu hoggaansamo tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah. Waxaan ku talineynaa in aan la socono:
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la diyaariyo godad hore. Wareegooda waa inay ahaataa qiyaastii 80 cm, qoto dheer - 1 m. Diyaargarow horudhac ah ayaa lagama maarmaan u ah dhulka si loo yareeyo wax yar. Sida caadiga ah nidaamkan waxaa la sameeyaa 1 bil ka hor inta aan la furin.
Haddii aad dooratid meel leh biyaha hoose ee biyaha, ka samee dheecaan: waxaad u baahan tahay inaad qoddid godka qashinka ah ee ku saabsan 1.5 m oo buuxi jajab.
Kadibna waxaad u baahan tahay inaad gawaarida ku dhex foorarsato godka.
U hubso inaad dhul bacrimiso. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa dharka ugu sareeya ee peat, humus ama Bacriminta macdanta.
Kadibna si toos ah dhulka. Xaqiiji xididdada geedka iyo wax yar ka daadi godka. Si kastaba ha ahaatee, ha ku qodin qoto dheer: qoorta xididka waa in lagu dhejiyaa 7 cm oo ka sarraysa heerka ciidda.
Ku dheji foostada godad qallalan.
Waa lagama maarmaan in la qodo godka agagaarka jir - godka jirridda. Waxay lagama maarmaan u tahay fududaynta waraabinta. In dalool, mulch ciidda.
Waa muhiim! Markaad beerto geed waa in ay ka fogaataa meelaha dhulka ku yaal. Masaafada ugu yar ee la gaarsiin karo dhulka waa 2 m.
Haddii aad qorsheyneyso inaad dhowr geed oo dhir ah mariso, waa inaad ku dhejisaa nidaam cayiman. Marka dhirta laga beerayo qaab khafiif ah, masaafada u dhexeysa waa in ay ahaataa ugu yaraan 3 m, midkaba 5 m. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu talinayaa in lagu beero geedo hal safar ah - markaa masaafada ayaa la dhimi karaa 1.5-2 m. Nafaqada, nidaamka xididkoodu wuxuu horumarin karaa labada tilmaam ee masaafo aan xadidnayn. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la dhiso xariijimo sidaas oo kale ah in hooska geedku aanu soo saarin geed geedka agtiisa ku dhow.
Si ay geedo tufaax ah u siiso beergoos wanaagsan, si loo horumariyo oo aan loo dhaawacmin, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u daryeelto.
Biyaha "Kandil Orlovsky" ayaa lagu taliyaa hal mar toddobaadkii. Hal geedka qaangaarka ah wuxuu u baahan yahay 2 baaldiyo oo biyo ah halkii waraabinta. Way ka fiican tahay in la jebiyo waraabinta: ku shub hal baaldi godka subixii iyo fiidkii labaad. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in la fiiriyo habka waraabinta inta lagu jiro bilaha xagaaga kulul. Waqtigaan oo kale, "Kandil" wuxuu bilaabmaa inuu midho dhasho, burooyinkuna waxay ka muuqdaan laanta, oo abuuraya goosashada sanadka soo socda. Haddii qoyaanku aysan ku filneyn, waxaa suurtogal ah in la yareeyo dhalidda xilligan xaadirka ah iyo sanadka soo socda. Jooji waraabinta bisha Agoosto. Inta badan habka waraabka ayaa ku xiran cimilada.
Nooc kasta oo tufaax ah ayaa leh sifooyinka beerashada - Melent, Sinap Orlovsky, Semerenko, Nedzwetskogo, Uralets, Imrus, Pepin saffron, Madaxwaynaha, Sarrifka, Dhalinyaradu dharbaaxay - laakiin haddii ay la socdaan waxaad ku raaxeysan kartaa noocyo kala duwan oo tageeran iyo midho goos goos ah.
Qabashada mulching waa mid aad muhiim u ah marka daryeelidda geed. Lakabka mulch ee 5 cm, daboolay godka, ka hortagi doonaa koritaanka haramaha, iyo sidoo kale hayn doonaa qoyaan. Intaa waxaa dheer, thanks to mulching ciidda waxaa lagu hayn doonaa xaalad dabacsan, iyo rayshada qoraxda waa la arki doonaa. Ciidda Mulch waxay gacan ka geysataa koritaanka xididada macquulka ah, taas oo saameyn wanaagsan ku leh horumarinta geedka. Si loo sameeyo hababka cayda ah, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo cirbado, jilif, caws ama dhadday.
Bacriminta waxaa lagu talinayaa guga. Waqtiga beerto, bacriminaha dabiici ah ayaa badanaa lagu dabaqaa (5-15 kg / sq. M). Haddii aad rabto in aad isticmaasho Bacriminta macdanta, HOL (500 g) ama amooniyam nitrate iyo nitroammophoska samayn doonaa.
Ma taqaanaa? Apple waxaa loo aqoonsan yahay midhaha rasmiga ah ee gobolka New York iyo Washington.
Xilliga dayrta, bacrimin ayaa sidoo kale la isticmaali karaa, laakiin kaliya nitrogen-free. Haddii dhirta lagu beeray ciidda hodanka ah, marar badanna waa inaadan beerin beeraha, laakiin marka laga hadlayo beeritaanka saboolka saboolka ah waa inaad sannadkiiba marisaa labiska.
Haddii "Kandil" uu ku soo weeraro cayayaanka ama cudurada, waa lagama maarmaan in la gubo caleenta iyo laanta la burburiyey. Sidoo kale waa lagama maarmaan in la qaado daawada sunta cayayaanka. Si looga hortago horumarinta cudurada iyo taranka cayayaanka, waxaa lagu talinayaa:
Iyadoo imaanshada manjooyin guga ee laamaha qalalan iyo bukaanka;
ka saar jilif dhintay, lichen iyo dharka moofaha;
ku samee dharka geedka-tufaaxa ee suunka xayiraadda;
waxay soo ururiyaan miraha dhaca iyo burburay maalin kasta.
Geedka ayaa leh iska caabin cudur oo wanaagsan waxaana marar dhif ah laga qaadaa cudurada fangas. Xaalado dhif ah, canlil waxaa lagu weerari karaa jiritaanka geedka tufaaxa, midab ama sawfly.
Adkeysiga si fiican u shaqeynaya, waxaad hagaajin kartaa heerarka dhalidda iyo sonkorta, cabbirka miro, iyo sidoo kale ka ilaalinta geedaha cuduro kala duwan. Waxaan ku talineynaa isticmaalka talooyin wax ku
Geedka geedka tufaaxa, waxaad u baahan tahay inaad laamaha jarjartid saddex meelood hal meel. Tani waxay fududeyneysaa qaadista taajka.
Waa muhiim! Si dhakhso ah ugama gooyn kartid geedo badan oo laamo ah. Qaddarka caleemaha la gooyey waa in aysan ka badneyn ¼ ee wadarta guud.
Gooyaa waa in la sameeyaa sanad walba guga hore, ka hor inta ku hari bilaabaan in ubaxu.
Haddii manjooyin buuxa la sameeyo, laamaha waa in la gooyaa saldhigga.
Gooyooyinka waa in si adag loo fuliyaa sida waafaqsan xeerarka, habka kaliya ee aad ku gaari karto wax-soosaarka sare iyo koraan warshad caafimaad leh.
Marka la gaaro marxaladda, "Zelenushkas" waxay ubaahantahay in ay gooyaan kala badh goosashada, oo dooranaya oo kaliya miraha la soo saaray, taas oo ah dhowr mitir oo cabbir ah. Nidaamkan waxaa lagu magacaabaa "Sharciga soo saarista". Thanks to, miraha waxay yeelan doonaan cabbir weyn, waxay noqon doonaan dhoola dhadhan. Waxay sidoo kale ka caawin doontaa geedka tufaaxa inuu diyaariyo xilliga qaboobaha.
Marka la diyaarinayo jiilaalka, waxaa lagu talinayaa in lagu duubo shtamb iyadoo la adeegsanayo daboolida alaabta ama naylka naylka. Wax kasta oo ka soo baxa biyaha iyo hawada ayaa qaban doona.
Ma taqaanaa? Apple wuxuu leeyahay alaabta tonic ah: beddel koobiga qaxwada leh hal miro, isla markiiba waxaad dareentaa kor u kaca xoog iyo miro.
Inkasta oo xaqiiqda ah in "Kandil" loola jeedo noocyo udgoon udgoon, si loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo barafka, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado mulching ay kula humus fardaha aagga godka. "Kandil Orlovsky" waa noocyo kala duwan oo aan la qabin oo tufaax ah, kaas oo, si taxadar leh u ilaaliya, waxay bixisaa dalag weyn. Thanks to dhadhanka wanaagsan ee miraha, waxaad u isticmaali kartaa cusub oo diyaariyo diyaarinno badan oo loogu talagalay jiilaalka.